Zingaphi iisentimitha ezinyaweni? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Zingaphi iisentimitha unyawo?
Unyawo olu-1 = 30,48 cm, iisentimitha
Ndiyayazi le nto esikolweni. Ingcali yethu yezibalo iququzelele ukhuphiswano apho imibuzo enjalo ihlala ivela khona. Andizange ndibathande kakhulu ngelo xesha, kodwa ngoku ndiyaqonda ukuba ayilolize ukuba bendixinekile phambi kokhuphiswano.
Ukulinganisa kwiinyawo kwasetyenziswa kanye eRashiya. Kodwa kusekho unyawo lwaziwa ngcono njengamaCandelo esiNgesi kunye nawaseMelika emilinganiselo yobude, umgama. Ukuba kubonisiwe ngamasentimitha, ke eNgilani Inyawo enye ngu-1: 30,48 cm.
Unyawo yinto engaqondakaliyo.
Ngokubanzi, unyawo luguqulelwa ukusuka kwisiNgesi njengonyawo. Ndicinga ukuba abantu abaninzi bayazi ngale nto.
Kwaye uyazi ukuba unyawo olu-1 kwiisentimitha eziqhelekileyo ziimitha ezingama-30,48, 0,3048 okanye i-XNUMX ngokulandelelana.
Unyawo olu-1 i-intshi.
unyawo lwake lwasetyenziswa kumazwe amaninzi kwaye kuyo yonke indawo intsingiselo yalo yahlukile. ichanekile ngokukodwa ngenxa yokwahluka phakathi kwamaxabiso amaFrentshi namaNgesi xa intsingiselo yesiqu esifutshane sikaNapoleon. kodwa ngokufuthi sithetha yonke inyawo lesiNgesi okanye iBritane. ubukhulu bayo buziipesenti ezingama-30.48
Ndingabhala nangolwazi oluza phambili. Kw unyawo olunye - i-30,48 yeesentimitha ezingama-12, i-intshi ezi-0,3333, iiyadi ezi-0,0003, iikhilomitha ezi-0,3048, iimitha ezi-0,00019, iimayile ezi-XNUMX. Ukuba ndinomdla, ndingaguqulela amanye amanyathelo emilinganiselo, kodwa ngokubanzi kungcono ukusebenzisa iincwadi zesalathiso kwimiba enjalo, kuba akukhange kubekho ngxaki kulo mbandela mva nje. Ukuba kukho imfuneko, ndingakunika ulwazi ukuba luzijonge phi ezi zikhombisi, nangona ndicinga ukuba wena ngokwakho uyakuzifumana ngaphandle kweengxaki.
Phakathi kweenkonzo zayo ezininzi, uGoogle unesibali sokubala esilungele ukusetyenziswa kwimibuzo enjalo. Ukufumana impendulo kulo mbuzo, chwetheza kuGoogle:
1 unyawo ukuya kwiisentimitha
Impendulo: 1 iinyawo = 30.48 ye-XNUMX yeesentimitha.
Eminye imibuzo efanayo, umzekelo, iikhilomitha ezingama-23 kwiimayile.
E-Rashiya, akuqhelekanga ukuba ukulinganisa yonke into ngeenyawo. Ndiye ndakhangela kwidayari yam yomzi mveliso kwaye phakathi kwamanqanaba obude kuyabonakala ukuba
Unyawo olu-1 = i-intshi ezi-12 = 304,80 mm, i.e. 1 ft = 30,48 cm. Kuba 1 cm = 10 mm.
Unyawo unyawo lwesiNgesi, okanye endaweni yonyawo (umdlalo webhola, ngendlela, ukusuka apha). Ke ngoko, unyawo lubude obuqhelekileyo benyathelo lomntu. Unyawo olunye ngu-30,48, XNUMXm ngeesentimitha, oko kukuthi, lingaphantsi kwesinye kwisithathu semitha.
Unyawo luyunithi lomgama kwinkqubo yaseBritane yamanyathelo. Kwamanye amazwe, unyawo lunentsingiselo eyahlukileyo ngokupheleleyo. Ngo-1958, amazwe athetha isiNgesi athatha isigqibo sokumanyanisa iiyunithi zazo ngobude nobunzima, kwaye ukusukela ngoko unyawo lube ngu-0,3048 m.
Unyawo, le yunithi endala yomgama engeyonxalenye yenkqubo ye-SI yamazwe aphesheya. Kumazwe ahlukeneyo, unyawo lwaluneentsingiselo ezahlukeneyo, emva koko inyani yayisekwe unyawo lwamanye amazwe, apha kwi-nm empeleni ngu-0, 3048 yeemitha okanye ezingama-30 inqaku lama-48 amakhulu eesenti.